PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-21 - ‘Akubanjiswane kuliwe nokubulawa kwabesimame’
‘Akubanjiswane kuliwe nokubulawa kwabesimame’
Isolezwe ngeSonto - 2017-05-21 - IZINDABA -
IZIGAMEKO zakamuva zokubulawa ngesihluku kwabesifazane ngabantu besilisa abasondelene nabo zishiye abantu abaningi bakuleli bethuthumela. Ezinkundleni zokuxhumana kunomkhankaso othi #Man Are Trash nokuchaza ukuthi amadoda angodoti. UKHETHA SANGWENI uxoxe nokhulumela inhlangano elwela ukulingana ngokobulili iCommision For Gender Equality UMNUZ JAVU BALOYI ngalezi zigameko. kwabesifazane. Yikho lokhu okwenza bengabazi nokuthi bayini bangabahloniphi. Kufanele kushunyayelwe ivangeli lokuhloniphana ngoba abesifazane badinga ukuvikelwa amadoda, kodwa yiwona ayizitha zabo. Akuyona inkinga kahulumeni yedwa noma yalabo abayizisulu, kodwa wonke umuntu nongakathinteki angazitsheli ukuthi akuhlangene naye ngoba kusasa kuzoba sendlini yakhe bese eludinga usizo.
YINI obona ukuthi kufanele yenziwe ukulwa nalesi sihlava esibonakala siyinkinga emphakathini?
KUDINGEKA iqhinga eliphusile ngoba ngeke siyisombulule le nkinga ngosuku olulodwa. Kufuneka uhulumeni nabantu babambisane ikakhulukazi amadoda yiwona okufanele asho ngazwi linye alwe nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Kufuneka abantu bakhulume nonembeza babo bazitshele ukuthi bangabavikele hhayi abahlukumezi.
LIKHONA iqhaza elingabanjwa abaholi bendabuko nabezenkolo kulokho?
IZINDUNA,amakhosi nabefundisi kufanele babuyele ezimfundisweni zakudala zokuthi bahlale phansi namadoda bawafundise ukuthi indoda wumuntu onjani futhi iziphatha kanjani ukuze ibe yindoda eqotho. Obaba emakhaya bahlalelwe umthwalo wokuqapha ngeso lokhozi izingane zabafana baphinde benze kahle phambi kwazo ukuze babe yisibonelo esihle. Ukutotosa izingane uma sizikhulisa akufuneki, ngoba yikho okudala ukuthi ingane ikhule ibe yibhoklolo yazi ukuthi into eyishoyo iyenzeka, uma kungenjalo kufanele kusuke umsindo.
NGABE uMnyango wezokuShushiswa koMphakathi wenza okwenele ukushushisa uphinde ugwebe abasuke benamacala okuhlukumeza?
ANGIBONI ukuthi kwanele ngoba baningi abadedelwayo, nabagwetshwayo kuba yizigwebo ezincane ezingabafundisi isifundo. Sinamaphoyisa aqeqeshwe ngokusezingeni eliphezulu ukubhekana nalezi zigameko. Ngesikhathi kunodlame kwakukhona uphiko oluyispesheli olwalubhekelele udlame, namanje siyaludinga uphiko oluzobhekana ngqo nesihlava esihlaise lubhojozi abantu besifazane kuleli. Okunye okuhluphayo baningi abantu besifazane abahlukunyezwayo, kodwa bafela ngaphakathi esikhundleni sokuphumela obala babike ngalezi zinto.